Hojiiwwan Gurguddaa Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenyaa
Hojiiwwan seektara hedduu (Cross-cutting issues)
HIV/AIDS fi Dimma Dargaggoota
Dhimma kiraa Sassabdummaa
Hojii Dhabdummaa hir’isuu ilaalchisee(IMX)
Hojiiwwan Gurguddaa Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenyaa.
Hojiiwwan gurguddaa karoora bittaa fi dhiyeessii
Tarsiimoon raawwii karoora qabaachuun fiixa bahiinsa karoorichaatiif shorrii inni taphatu guddaa ta’uun isaa ni beekama. Haaluma kanaan, tarsimowwan raawwii karoora bara 2008 haala armaan gaditti dhiyaatera:
Meeshaalee gosa fi baay’inaan walfakkaatan bakka tokkootti walittii sassaabuun (Bulk Purchase) mala bittaa caalbaasii ifaa biyyaa kessaatiin raawwachuu dha. Mallii kun dhiheessittoota baayinaan kan hirmaachisuu waan ta’eef gatii madaalawaa ta’e akka gabarraa argannuu fi dhiheessa walirraa hin cinnee akka umamu kan taasisuu waan ta’eef meeshaaleen (Lot) dhaan qoodudhaan kan raawwatamu ni ta’a. bu’uruma kanaan akkataa gosa isaanitiin tarsimoon raawwii isaanii ilaalchisee:-
Driling Tools & Accesseries (Meeshaalee Qootinsa Boollaa) isaaniis Steel Tooth bits, Tri-cone bits, Tungsten carbide, Hummer Cylinder with Button bits, D/f size of subs, Elevators fi k.k.f walitti-funaanun iddoo tokkotti akka raawwatamaniif.
Driling Fluids (Dhangala’oo fi Pawdarii ) isaaniis: Foam, Bentonite fi Polymers amala hojii intarpiraayizii keenyaa irraa kan ka’e meeshaaleen kun istookii keessattii qabamuu waan qabaniif dursii keenname bittaan kan raawwatamu ta’a.
Well Construction Materials /meeshalee ijaarsa boollaa/ isaaniis D/f sizes of Steel Casings, D/f sizes Surface Casing fi D/f sizes PVC Casing istookii keenya sakkata’uun bittaan isaanii walitti-sassabuun kan raawwatamu ta’ee akaakuu gaaffii keenyaa waliin kan warshaan Kubaniyyaa Ujummoo Sibila Oromiyaa tiin oomishamu yoo ta’e bittaa kallatii tiin kan raawwatamu ta’a ykn mala caalbaasii ifaatiin kan itti-deemamu ta’a.
Pumping Test Materials /meeshalee yaalii paampii tiif oolan gosa adda adda/ isaaniis: Submersible & Dewatering Pumps, Generators, D/f sizes of Observation Pipe, Riser Pipe d/f Size, Water Meter d/f sizes, Deep Meter & GPS akkataa barbaachisummaa isanitti dursa kennameef ilaalcha keessa galchuun mala caalbaasii jirun baajata qabameef irratti hunda’uun kan raawwatamu ta’a.
Tarsimoo Bittaalee meeshaa Spare Parts and Maintenance ittiin raawwatamuun walqabatee bakka saditti qooduu dhaan ilaalameera:
Meeshaalee Kaampaanii irraa kallattiidhaan aragamaniif / (MOENCO, NISSAN,RIES ENGINEERING, EBG fi k.k.f) irraa bittaa kallattiin /direct purchase/ tiin kan raawwatamu ta’a. bittaan haala kanaan raawwatamu yeroo kan qusatuu fi meeshalee amansisaa ta’an /availability of genuine parts/ argachuuf kan gargaaru dha.
Meesshaalee jijjiirtuu (Fast Moving items of Spare Parts) mana kuusaa keessattii qabachuu dhaan suphaa ittisaa (Preventive Maintenaance) tiif oolan kan akka oil Filter Fuel filter, bolt with nuts fi kkf istookii isaanii yeroo yeroon sakkata’uun bittaa kallattii tiin ni raawwatama.
Suphaa alaa (External Maintenaance) ilaalchisee kan kallattiin Kaampanii dhaan suphamaniif mala bittaa kallattiin ni raawwatama, kanneen biroo immoo mala caalbaasii murta’aa tiin dhaabbilee filachuun waliigaltee yeroo dheeraa dhaabbilee filataman waliin taasiisuun ykn suphaa xixiqqaa yoo ta’e proformaa funaanuun battalumattii bittaa tajaajilichaa raawwachuun ta’a.
Tarsimoon Bittaa Fuel, Oil & Lubricant raawwachuuf filatame bittaa Kallattii yammuu ta’u dhaabbilee boba’aa fi dibata dhiheessan gatii wal-fakkatuun waan dhiheessaniif kan jiran keessaa dhaabbata tokkoo (Total Ethiopia S.C) filachuun waajjira keenyaaf dhihootti kan argamuu fi maammila yeroo dheeraa waan ta’aniif tajaajjila foyyee qabuu kennuu kan danda’an waan ta’aniif dhaabbatichaa waliin waligaltee taasisuun kan raawwatamu ta’a. Kuniis dhiheessa walirraa hin cinnee fi amansiisaa ta’e akkasumas hanqina maallaqaa yeroo itti-nuqunnamuus tajaajila liqii (Credit Facility) argachuudhaaf bifa ilaalcha keessa galcheen kan raawwatamu ta’a. Kuusaa keessatti qabaachuun (Rakkoo Boottee boba’aa tiin walqabatee jiru hikuun) dhiheessa itti fufinsa qabuu akka jiraatuu taasiisuuf karoorffame jira.
Tarsimoo bittaa cirracha lagaa /River Gravel/ tiin walqabatee jiru ilaalchise:-
Hanqina cirrachaa lagaa yeroo adda addaa qunnamu Pirojaktii irrattii bifa baasii xiqqeessuu danda’uun hiikuuf naannoo Oromiyaa keessttii iddoon Omishaa cirrachaa lagaa omishuun danda’amuu qorannoon addaan baasuun giddugala adda addaa kilaastarii dhaan Naannoo Oromiyaa addaan qooduu raawwachuuf kallatiin ta’eera. Kilaastariin Kuniis akkataa armaan gadii ta’a;
Naannoo shawaa fi giddugala Oromiyaatti Projaktii hojjatamuuf Saayittii Olonkoomii irraa bittaa raawwachuun dhiheessuu ta’a.
Naannoo Baha Oromiyaa tiif Godina Baalee irratti qorannoo kanaan dura taasifameen cirrachi waan argamuuf Bittaa Cirrachaa raawwachuun akka dhihaatu taasiisuu.
Akkasumas, naannoo Lixa Oromiyaatti gara fuladuraa qorannoo iddoo cirrachi baayyinaan itti argamuu danda’u addaan baasuun kan itti deemamu ta’ee yeroof akka hojiin addaan hin dhaabbanne Olonkomii irraa kan dhiyaatuu ta’a. Kana malees dhiheessa kana akkaataa Kilaastara armaan olitti ibsaman milkeessuuf qaama Mootummaa Godinaa ykn Anaa waliin Haariroo gaarii umudhaan Cirraa hojii lammilee dhaaf kan umuu waan ta’eef irratti kan hojjatamuu ta’a.
Adeemsa Bittaa fi mala bittaa cirrachi ittiin raawwatamu ilaalchisee waldaalee gurmaa’anii jiran saayitii Olonkomii irratti baayina waan qabaniif gatii wal-fakkaatuun waan hin dhihessineef garaagarummaa gatii kan qabu waan ta’eef; akkasumas haalli bittaa cirrachaa rakkisaa waan ta’eef hanga rakkoon kun furmaata argatutti koree bittaa kana raawwatu dhaabuudhaan kan raawwatamuu ta’a. Dabalataannis cirrachii kun haala qabatamaa jiruun bayinaan kan argamu ganna keessatti waan ta’eef cirracha qulqullaa’ee akka dhiheessinuuf Meetir Kubii 700m3 karoorfame keessa yeroo gannaa hanga sadaasa 2008 walakaan isaa akka raawwatamuuf karoorfame jira.
Gabatee : Karoora Bittaa meeshaalee waggoottan shaqnanii (2008 -2012/Qr/)
Rawwii bara 2007
Meshaalee qotinsa Boollaa tiif
Meeshaalee Konstraakshinii Boollaa tiif
Meeshaalee Kaamppii tiif
Meeshaalee jijjiirraa suphaa tiif
Zayitii fi dibataalee adda addaa
Bittaalee adda addaa tiif
Hojjilee amalaa isaanittin sektaroota heedduu wajjiin walitti hidhaman fi sektaraa heedduun hojjeetammuu qabaan kan HIV/AIDS,Dhimma korniyaa , kirraa sasaabdummaa kkf, qindeessuun sekterootaawwan barbadaniif xiyyeefannoon adda itti kennamee ni hojjatama.
HIV/AIDS dhukabaa humna oomishaa ta’ee miidhuu bira darbee dhukkubaa dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin raakkoo walxaxaa jiru. Kanaafuu raakkoo kanaaf qindaminaan xiiyyeeffannoo kenninee hojjechuun barbaachiisaadha.
Akkumaa beekkamutti hojjataan IDO harki caalu hojjataa yaroo dheeraaf maatii isaatiin addaan bahuun diidarratti hojii hojjachaa dabarsu. Kanaaf amala hojii sektara kanaa, hojjataa dhukkuba kanaaf saxilamuu waan danda’uuf hubaannoo hojjataa kanaa cimsuu waan barbaachisuuf waltajjilee hojii adda addaa seektara kanaan gaggeeffamurrattii hojiin hubannaa cimsuu hojjattootaa Bulchiinsaan ni hojjatamaa . Kanaafuu.
Hubannaan hojjattoota cimsuu waggoottan shananitti namoota 550akka kennamu ni godhama.
Hojjataan intaarpiraayizichaa balaa dhibeen kun fidaa jiru akka hubatu gochuu mindaa irraa qarshii walitti busuu warraa rakkoo dhukkubbaa kanaan qabamaniif deeggarsii akka godhuu ni godhama.
Iddoo pirojaktooni itti gaggeeffamutti daragaaggoota hojii dhabeeyyin hojii kanatti akka fayyadaman gochuun dargaagoota hojii dhabeeyii walumatti namoota 2412 ta’aaniif carraan hojii ni ummama.
Qajeelfama haala hojjataan rakkoo kana keessa jiru itti fayyadamuun ibsu BEFE irra qideessuun itti fayyadhamuu.Daaimman haadhaf abbaa hin qabne 115 waggoottan kana keessatti ni deeggaramuu;
Gabatee :. Karoora Hojiiwwan To'annoo fi Ittisa HIV/AIDSii
Ijaarsa dandeetti Ittisa fi to’annoo HIV/AIDsratti
Leenjii hubannoo sadrkaa intarpiraayiziitiitti hojjattootaaf kennuu
Daa’mman sababa HIV/AIDSn maatin isaanii miidhaman gargaaruu
Hojjatoota seektarichaa vaayirasii HIV/AIDS waliin jiraatan gargaaruudhaaf akkataa seeratti maallaqa midaarraa walitti qabuu.
Carraa Hojii dargaggootaaf uumuu .
Misooma biyya tokkootiif gaheen dubartootaa iddoo olaanaa waan qabuuf hojii korniyaa idileessuu fi dubartootaaf carraa hojii ummuu fi deeggarsaa hojjataaf gochuu sadarkaa waajjiraa ol’aanaa fi projakettii xiyyeeffannaa kennuun ni hojjetamaa.
Walumaa gala sirna koorniyaa idileessuu fi lafa qabsiisuuf :- Imaammata dhimma dubartootaa, paakeejii misoomaa fi jijjiirama dubartootaa, qajeelfamaa koorniyaa idilleessuu, Hojiimaata koorniyaa idilleessuu, Maanuwaallii koorniyaa idilleessuu fi qajeelfamaa garaagarraa mana hojii keessaa jiru fayyadamuun akka mana hojii keenyatti sirna koorniyaa idilleessuu keessatti xiyyeeffannoo itti kennuun hojiimaatawwan jiran giddugaleessa godhachuun hojiiwwan keenya keessatti kan itti hojjatamu ta’a.
Kiraa saasabdummaan balaa hamaa sirnaa kanaa ta’uun isaa beekame hojjataan Intarpiraayizichaa akka irrattii qabsaa’u gochuun barbaachisaa dha. Kanaafuu raayyaan jijjiramaa tokko shanee marii gochuun jalqbamee cimsee akka itti fufu gochuun isaa kan yeroo hundaa keessatti dhimmotaa kiraa saasaabdummaaf namaa saxilaan sakata’uun akka irratti qabsa’u gochuu. Hojii ilaalcha kiraa saasaabdumaa dhabamsisaan umuuf ni hojjetama. Sirnaa bittaa keenyaa fi faayinasii keenyaa ilaalchisees gochaa kiraa saasaabadummaaf akka qaawwaa hin banne gochuuf hojii hojimaata to’annoo dirirsuun, hojjin bittaa fi faayinaansii keenyaa akkataa sirnaa diriirsuun bifa iftominaa qabuun akka hojjirra oolu gochuun hojiin hubannaa uummuu fi to’annoo fi hordiffiin cimaa gaggeessuu fi hojiirraa olchuuf ni hojjatamaa.
Gabatee :. Karoora hojiiwwan Iidilee Naamusaa fi Farra Malammaltummaa
Qajeelfamaa Naamusaa,Malaammaltummaa fi toofta qabsoo farra malaammaltummaa irraatii leenjii hubannoo uumu keennu
Qondaala Naamusaa caasadhaan kaawwame akka ramadamu taasiisuu
Qajeelfamaa Naamusaa mana hojiichaa qopheessuu fi hojii irra akka oluu taasisuu
Gabaasa Oditii keessaa fi alaatiin akka sirreffamu dhiyaate hojiirra oolmaa isaa hordoofu
Naamusaa fi qabsoo farra malaammaltummaa ilaalchisee oggantootaa fi hojjeettoota mana hojicha gorsuu fi deegarsa ogummaa keennuu
Hojiiwwan pirojektootaa fi isaan walqabatan ilaalchisee bara darbe hojiidhabdummaa hir’isuudhaaf sochiin taasifame akka jalqabbiitti gaarii waan taheef waggoottan karooraa kana keessatti irra caalaa raawwachuudhaaf hojiin dhaabbii fi yeroo dargaggoota hojii dhabeeyyiidhaaf karoorfamee jira.haaluma kanaan dargaggoota Dhi 1,837 Dub 575 Waliigalatti dargaggoota 2,412 hojiitti galchuuf karoorfamee jira.
Gabatee :. KGT II keessatti Carraa hojii lammiileef umamu
Gosa hojii irratti hirmaatu dhaabbata dhaabbataab
2007 hojii hojjetame
Maqaa dhaabbataa /Intarpiraayizii IDO